Best Plastic Case Case 100-240Vac Led Driver, Switching Power Supply Board, Dimming Led Driver Manufacturer in China
Description:Tranonkala Plastika 100-240Vac Led Driver,50W 1200Ma Led Driver,Famindrana Power Supply Board,Mpandrindra milina mandeha,,
Home > Products > Flicker Free Led Driver > Tranokaratra plastika 100-240VAC Led Driver
Ny vokatra avy amin'ny Tranokaratra plastika 100-240VAC Led Driver , mpanofana manokana avy any Shina, Tranonkala Plastika 100-240Vac Led Driver , 50W 1200Ma Led Driver mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Famindrana Power Supply Board R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fitaovam-piofanana mandeha amin'ny solosaina mitondra solosaina mitondra alalana  Contact Now
Plastic Case 0-10V Dimmable LED Driver 45W  Contact Now
60W 0-10V manaikitra ny mpamily mandeha  Contact Now
Fitaovam-piofanana mandeha amin'ny solosaina mitondra solosaina mitondra alalana
Vidin'ny singa: USD 3.5 / Piece/Pieces
Ity mpamily LED ity dia manana vokatra 100-240V LED amin'ny famokarana. Ny mpamily iray mahazatra dia hampihena ny androm-piainan'ny orinasan'ny LED, ny jiro tselatra, noho izany dia soso-kevitra ny hampiasa mpamily LED. Tondroin'ny...
Vidin'ny singa: USD 4.3 / Piece/Pieces
Ity mpamily LED ity dia manana vokatra 100-240V LED amin'ny famokarana. Ny mpamily iray mahazatra dia hampihena ny androm-piainan'ny orinasan'ny LED, ny jiro tselatra, noho izany dia soso-kevitra ny hampiasa mpamily LED. Fiara mpamily...
Plastic Case 0-10V Dimmable LED Driver 45W Ny HW45W-02 Series dia mpamily LED manana flicker maimaim-poana ary telo-in-one dimming function. Ny sidina Max.input dia manome 90-305V, ary manana hery lehibe. Ity mpamily ity dia natao ho an'ny jiro...
60W 0-10V manaikitra ny mpamily mandeha
Vidin'ny singa: USD 7.2 / Piece/Pieces
Overview Ity dia 60W PWM Dimming LED mpitarika malaza indrindra any an-tsena satria izy io dia sarobidy, endrika manokana, hery ambony ary ela velona lava. Izy io dia miasa ho an'ny LED Panel, LED Troffer, LED Downlight sy ny sisa,...
Shina Tranokaratra plastika 100-240VAC Led Driver mpamatsy
Solon-tsarimihetsika solosaina mandeha irery
Ny fifandraisana tokana, ny input 180-240V, ny fonosana plastika plastika, ho an'ny fantsom-pitaovan'ny tontonana, ny ankamaroan'ny tsenan'ny Eoropeana, ny famatsian-drano any an-tokantrano indraindray, ny CE dia manara-penitra, 3 taona ny fiantohana, fampiasana hafanana ambony.
Tranonkala Plastika 100-240Vac Led Driver 50W 1200Ma Led Driver Famindrana Power Supply Board Mpandrindra milina mandeha 100-240vac Led Driver